Udugga: muxuu yahay, faa iidooyin iyo waxbadan oo badan | Ragga Stylish
Weligaa ma maqashay udugga? Xaqiiqdii haa, maadaama ay ku saabsan tahay daawo xiiso leh dhibaatooyin kala duwanGaar ahaan haddii aad doorbideyso inaad isku daydo inaad ku hagaajiso waxyaabo kale oo dabiici ah ka hor intaadan tijaabin daawooyinka.
Laakiin Waa maxay udugga caanka ah iyo sidee dhab ahaan kuu caawin kartaa? Halkan waxaan kaga jawaabeynaa su'aalahaas iyo kuwa kale ee ku saabsan mowduucaan.
1 Waa maxay aromatherapy?
2 Faa'iidooyinka udugga
2.1 Cunto-qabatinka walaaca
3 Maxay kugu dareensiineysaa wanaag?
4 Miyuu udugga ubadku aamin yahay?
Waa maxay aromatherapy?
Sida magaceeda ka muuqata, udugga waa nooc daaweyn ah ama daaweyn ku saleysan udgoon. Dadka go'aansada inay maraan daaweyntan waa inay la xiriiraan waxyaabaha laga soo saaray dhirta ee loo yaqaan Wax alaab ah lama helin.. Waxyaabahani waxay ku yimaadaan dhalooyin yaryar (aragtida ugu horeysa waxay tahay inay aad ugu yartahay qiimaha ay leeyihiin), laakiin waa in la ogaadaa in, marka la fiiriyo feejignaanta badan, qadar aad u yar ayaa badanaa ku filan, taas oo ka dhigaysa inay sii dheeraato.
Dhanka kale, waxaa lagama maarmaan ah in laga taxadaro marka la dooranayo saliidaha lagama maarmaanka ah maxaa yeelay, sida had iyo jeer dhacda, dhammaan waxyaabaha dhalaalayaa maahan dahab. Noocyada qaarkood waxay isku daraan saliidaha lagama maarmaanka ah iyo walxo kale. Sida ay sheegeen khubaradu, waxaa muhiim ah in howsha loo maro hab qaas ah si loo hubiyo in astaamaha geedka uusan lumin. Haddii aad go'aansato inaad tijaabiso, waxaa fiican inaad aaminto dhakhaatiirta udugga ama ugu yaraan aad dukaamada ku takhasusay wax soo saarka dabiiciga, halka aad fursad ugu heli doontid inaad weydiisato talo haddii loo baahdo.
Xaaladaha qaarkood, udugga waxay yeelan karaan faa'iidooyin caafimaad, laakiin aad ayey muhiim u tahay, sida had iyo jeer marka laga hadlayo daaweyn kale, ha u isticmaalin inaad ku badasho daaweyntaada. Haddii aad u maleyneyso in udugga ay xallin karto dhibaatadaada si ka wanaagsan daaweynta, la tasho dhakhtarkaaga marka hore. Isaga ama iyada ayaa kuu sheegi doona talaabooyinka aad qaadi karto.
Daaweynta udugga ayaa muddo dheer la baaray oo lagu dhaqmay, sidaa darteed fursadaha ma waxaad horey u ogtahay inay la xiriirto qaar ka mid ah faa'iidooyinka caafimaadka waxaana laga yaabaa inaad xitaa maqashay dad aad ka ogtahay qaar ka mid ah horeyba. Haddii aad isku buuqdo oo aad u baahato inaad yareyso ka hor intaan xaaladdu faraha ka bixin, daaweynta dabiiciga ah ee naga khuseysa munaasabaddan ayaa kaa caawin karta, maadaama dad badani waxay yiraahdaan waxay soo bandhigtay natiijooyin aad u wanaagsan si loo yareeyo walwalkooda isla markaana loo wanaajiyo kooda tayada hurdada.
Sidan, udugga ayaa kaa caawin kara:
Yaree walbahaarka, walwalka, iyo diiqadda
Gaadho xaalad deggan iyo nasasho
Si fiican u seexo habeenkii
Ka hortagga iyo la dagaallanka infekshinka maqaarka (kaliya marka saliidaha lama huraanka ah la mariyo maqaarka)
Fiiri maqaalka: Cunnooyinka walaaca. Halkaas waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarro cunto oo badan, dhammaantoodna caafimaad qaba, oo kaa caawin kara inaad dhibaatadan ku sii haysato mid caan ku ah bulshada casriga ah.
Maxay kugu dareensiineysaa wanaag?
Udugga waxay soo saari kartaa dareen fayo qab, maxaa yeelay, sida muuqata, neefsashada saliidaha lagama maarmaanka u ah raaxada urta kaliya maahan, laakiin sidoo kale sanka dhexdiisa wuxuu keenaa nooc silsilad falcelin ah oo maskaxda soo marta. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda waxay la xiriiri doontaa saameynta ay ku leedahay maskaxda, halkaas oo ay gacan ka geysan laheyd dhaqaajinta meelaha muhiimka ah, ee mas'uulka ka ah howlaha sida shucuurta ama soosaarida serotonin (neurotransmitter oo xakameysa niyadda iyo hurdada, iyo waxyaabo kale).
Waxaa laga yaabaa inaad haysatid dhalo liin ah, chamomile, lavender, kedar, bergamot ama saliidaha kale ee muhiimka ah guriga ka dib markaad aqriso saameyntooda togan waxaa lagugu dhiirigeliyay inaad isku daydo xoogaa udugga ah. Hadda su'aal ayaa soo baxaysa: Sidee loola xiriiri karaa saliidaha lagama maarmaanka u ah inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka daaweyntan? Waa hagaag, ee udugga, saliidaha lagama maarmaanka ah labadaba waa la neefsan karaa oo loo marin karaa maqaarka iyada oo gacan laga helayo duugista ama qubayska. Way yar yihiin sakhraansan yihiin.
Maqaarka loo mariyo, saliidaha lama huraanka ah uma fiicna oo kaliya maskaxda, laakiin sidoo kale jirka. Waxay kaa caawin karaan yareynta dhibaatooyinka kala duwan ee maqaarka la xiriira iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinkooda bakteeriyada. Khabiirada qaar xitaa waxay kala taliyaan xanuunka wadajirka ah.
Miyuu udugga ubadku aamin yahay?
Daaweynta ku saleysan saliidaha lama huraanka ah waa amaan, laakiin mararka qaarkood waxay sababi kartaa falcelin aan fiicneyn, inta badan cuncunka indhaha, maqaarka iyo xuubka xabka. Waa in la ogaadaa in Waa inaanay waligood sakhraamin haddii aanu xirfadle la xaqiijiyey kuu sheegin.Maaddaama hadal ahaan, saliidaha lagama maarmaanka ahi ay waxyeelo u geysan karaan jirkaaga, gaar ahaan waxyeellaynayaan kelyaha iyo beerka.
Marka laga hadlayo waxtarkeeda, runta ayaa ah in jawaabta ay ku kala duwan tahay hadba qofka aad weydiiso. Waxaa jira dad sheeganaya inay dareemayaan wanaag ka dib mahadsanid udugga, halka kuwa kale ay dhahaan ma aragno wax isbeddel ah. Marka hadday ishaadu qabato, waa arrin inaad adigu iska tijaabiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Aromatherapy
Sida loo doorto heerka mobilkaaga
Cuntooyinka leh fitamiin B